Home News RW Kheyre iyo Guddoomiyaha Baarlabaanka Maxamed Mursal oo isku qilaafay ka qeyb...
RW Kheyre iyo Guddoomiyaha Baarlabaanka Maxamed Mursal oo isku qilaafay ka qeyb galkii casha sharafta loo sameeyay Wasiirka Arrimaha Dibadda Eriteriya (Sababta)
Waxaa habeenkii xalay aha loogu sameeyay casho sharaf soo dhaweyn ah wasiirka arrimaha dibadda Eriteriya Salax Cusmaan oo booqasho dhowr maalmood ah ku jooga magaalada Muqdisho. Casho sharafta oo ka dhacday xarunta maamulka Gobolka Banaadir aya waxa ka soo qeyb galay xubno ka tirsan xukuumadda JFS.
Guddoomiyaha BJFS Maxamed Mursal oo diidanaa in uu yimaado xafladda casho sharafta ah, aya waxaa RW Kheyre uu u sheegay in isaga iyo Madaxweynahaba ay iman doonaan casho sharafta, balse markii uu Guddoomiye Maxamed Mursal tagay xarunta Gobolka Banaadir aya loo sheegay in aanu madaxweynaha iman doonin casho sharaftaas, wuxuuna qaatay go’aan ah in uu isaga tago casho sharaftii loo sameeyay Wasiirka Arrimaha dibadda ee Eriteriya Saalax Cusmaan.
Guddoomiye Maxamed Mursal aya aad uga carooday beenta uu u sheegay RW Kheyre aya waxaa ka dhashay isfaham waa labada masuul soo kala dhex galay. Guddoomiye Mursal oo saaxib dhow la ah walaalaha Jabuuti aya la isku dayay in mugdi lasoo kala dhex geliya isaga iyo dowladda Jabuuti, balse uu ku fahmay qorshaha kooxda qiyaano qaran ee RW Kheyre iyo Madaxweyne Farmaajo.
Waxaa dalka Jabuuti ku sugan wasiir Maxamed Cali Xagaa iyo Wasiir Cabdi Canshuur oo loo diray in ay ka soo dhaadhacsiiyan dowladda Jabuuti in uu booqasho ku yimaado Madaxweyne Farmaajo si xal loogu helo mugdiga soo kala dhexgalay walaalaha Jabuuti iyo Dowladda Farmaajo. Masuuliyiinta oo muddo ka badan shan (5) maalmood ku sugan dalka Jabuuti aya ku dhibtootay in la qaabilo iskaba dhaaf in ay gudbiyaan fartiinta uu u soo dhiibay Madaxweyne Farmaajo. Ugu danbeeyntii maanta ayaa ay la kulmeen MW Ismaciil Cumar Geele oo si kulul ula hadlay wafdiga ayaa u sheegay in godob laga galay shacabka Soomaaliyeed iyo kuwa reer Jabuuti oo ah dad walaalaha. Wafiga ayaa ka codsaday in Madaxweyne Ismaccil Cumar Geelo oo ogolaado in MW Farmaajo yimaado dalka Jabuuti si xal loogu helo dhibka kala gaaray labada dhinac.
Previous articleWaa maxay ujeedada loogu daray Dr. Peter Middlebrook gudiga dhaqaalaha? Beecinta hantida qaranka! (cadeyn)
Next articleBarlamaanka Puntland oo go’aamiyay waqitiga doorashada Madaxweynaha dhacayso
How a Somali community took on a Minnesota meatpacking plant to...
Dhakhaatiir u dhashay kuba oo Xalad amaan daro looga saaray...